Doorashada Baarlamaanka iyo Midda Aqalka Sare Oo Dib U Dhacday, Lana Ogeyn Xilli Ay Bilaaban Doonaan – Goobjoog News
Doorashada Baarlamaanka iyo Midda Aqalka Sare Oo Dib U Dhacday, Lana Ogeyn Xilli Ay Bilaaban Doonaan
Doorashada Baarlamaanka ayey aheyd in maanta (24 September ) ka bilaabato caasimadda Muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada, goobaha codbixinta iyo sanaadiiqda ayey aheyd in ay yaallaan meelaha loogu talo-galay in ay doorashada ka dhacdo, Laakin taasi ma dhicin.
Dhinaca kale sida ku qoran jadwalka doorashada waxaa ay aheyd in berri oo ah 25-ka bisha ay dowlad goboleedyada soo gudbiyaan magacyada liiska u matalaya aqalka sare, taas oo sidoo kale aan dhici doonin, sida ay Goobjoog News u xaqiijiyeen guddiga doorashada dadban ee heer federal.
Dib u dhaca jadwalka doorashada 2016-ka markii 2aad ayaa imaanaya iyaddoo haatan ay Muqdisho uu shir uga socdo guddiga federaalka ah ee doorashada dadban iyo guddoomiyeyaasha guddiga doorashada dadban ee heer dowlad goboleed si loo soo saaro jadwal cusub oo doorasho.
Bandhig faneed balaaran oo lagu muujinayay xiriirka Soomaaliya iyo Talyaaniga oo lagu qabtay Muqdisho.
Icrksb zhyxhc cialis price cialis coupon cvs
Ozlrok ykjqpc Buy generic viagra over the counter cialis
Qztndv bzdhdp online viagra purchase cialis without a prescription
Uvognn wlvbbz canadian pharmacy Cbxnw
Madaxweyne Xasan oo u sharaxan xilka madaxweynaha ee doorashada 2016-ka